Maskaxda safarka Mareykanka ayaa amar ku bixisay in la kordhiyo illaa badhtamaha Janaayo 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Maskaxda safarka Mareykanka ayaa amar ku bixisay in la kordhiyo illaa badhtamaha Janaayo 2022
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waajibaadka maaskaro ee Mareykanka wuxuu u baahan yahay waji-xidhka wejiga inay xirtaan dhammaan dadka safarka ah ee saaran diyaaradaha, maraakiibta, tareenada, tareenada dhulka hoostiisa mara, basaska, tagaasida iyo saami-raacyada iyo xarumaha gaadiidka sida garoomada diyaaradaha, basaska ama marinnada maraakiibta, tareenada iyo saldhigyada dhulka hoostiisa mara, iyo dekedaha.
Dowladda Mareykanka ayaa kordhisay waajibaadka maaskaro gaadiidka dadweynaha.
Socotada Mareykanka waxaa laga rabaa inay xirtaan maaskaro diyaaradaha, tareenada, basaska.
Waajibaadka maaskarada gaadiidka ee TSA ee hadda jira wuxuu dhacayaa Sebtember 14, 2021.
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay, dowladda Mareykanka ayaa qorsheyneysa inay kordhiso waajibaadka maaskaro gaadiidka dadweynaha ee safrayaasha diyaaradaha, tareenada iyo basaska iyo garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada tareenka illaa Janaayo 18, 2022.
Waajibaadka maaskarada gaadiidka ee TSA ee hadda jira wuxuu soconayaa ilaa 13ka Sebtember, 2021 wuxuuna u baahan yahay adeegsiga maaskaro wejiga ku dhowaad dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha.
Waxay u baahan tahay waji-xidhka wejiga inay xidhaan dhammaan dadka safarka ah ee saaran diyaaradaha, maraakiibta, tareenada, tareenada dhulka hoostiisa mara, basaska, tagaasida iyo saami-raacyada iyo xarumaha gaadiidka sida garoomada diyaaradaha, basaska ama marinnada doonyaha, saldhigyada tareenka iyo tareenka dhulka hoostiisa mara, iyo dekedaha.
Dhammaan maraakiibta waaweyn ee hawada ee Maraykanka ayaa lagu wargeliyay kordhinta qorshaysan wicitaan lala yeeshay Maamulka Amniga Gaadiidka (TSA) iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) maanta, iyo wicitaan gooni ah oo lala yeelanayo ururada duulista ayaa la qorsheeyay Arbacada, ilaha warshadaha ayaa sheegaya.
Waajibaadka maaskaro gaadiidka dadweynaha ee Mareykanka ayaa ah isha dhibaatooyinka badan, ugu horrayn dusha sare ee diyaaradaha, halkaas oo rakaabka qaarkood ay diideen inay xirtaan maaskaro. Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka ayaa maanta sheegay inay ka heleen warbixinno shirkadaha duulimaadyada 2,867 rakaab ah oo diidan inay xirtaan maaskaro tan iyo 1dii Janaayo, 2021.
CDC -da bishii Juun waxay waxoogaa isbeddel ah ku sameysay xeerarkeeda, iyadoo sheegtay inaysan mar dambe u baahnaan doonin dadka safarka ah inay xirtaan waji -xidhka xarumaha gaadiidka dibadda iyo meelaha bannaanka ah ee doonyaha iyo basaska.
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta CDC, waajibaadka maaskaro gaadiidka ayaa wax ku ool u ahaa wax ka qabashada halista COVID-19 ee soo foodsaartay.
Queen Elizabeth wuxuu leeyahay,
Oktoobar 20, 2021 at 16: 29
Dad badan ayaa u dhinta mid kasta oo kuwan ka mid ah: sigaar cabid, khamri, ilmo iska soo ridid. Hase yeeshee dawladdu ma rabto inay mamnuucdo, xaddido, ka hortagto mid ka mid ah kuwan laakiin waxay ku dhaqaaqdaa ganacsiyadaas dilalka iyada oo loo marayo ururinta canshuuraha.